Nwa akwukwo UNWTO nke Bahrain na akwado otutu ndi mmadu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » Nwa akwukwo UNWTO nke Bahrain na akwado otutu ndi mmadu
Inweta njem nleta • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Network Njem Nleta Ụwa malitere emume igba egbe taa. Nzukọ ọhụrụ ahụ nke nwere ihe karịrị ndị otu 1000 na ndị na-ekiri ihe na mba 122 wepụtara otu ọnwa iji mee ememme. Ọ ga-egosiputa ohere dị iche iche ndị otu WTN ga-eweta na nzukọ a dịka nzukọ ndị njem njem zuru ụwa ọnụ na-elekwasị anya na nke SME.
E wuru World Tourism Network site na ala site na isi mpaghara mpaghara na-edu ndú maka nzukọ zuru ụwa ọnụ.
Mbido WTN nke ọnwa malitere taa na-elekwasị anya na njem nlegharị anya.
Taa Tarita Davenrock, onye isi oche nke Travel for All, na British Columbia, Canada na-akọwa nnweta pụtara ịnweta njem maka mmadụ niile.
Pankaj Pradhananga sitere na njem anọ nke oge na Kathmandu, Nepal gosipụtara na panel ahụ ọ na-eduzi otu akụkụ nke njem na njem njem si bụrụ ihe dị mkpa maka mba Himalaya.
Ọ B She Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, si Bahrain bụ nwa akwukwo na-azọ ọkwa UNWTO Secretary General. Ọ ga-abụ nwanyị mbụ nwetara ọnọdụ a. O kwuru, sị: "Ọ tụrụ m n'anya site na ọrụ nke ndị njem nlegharị anya dị ka" Anya Anya "nke ndị na-eme njem maka ndị njem kpuru ìsì na-enye ihe na-eme njem nleta karịa naanị ọrụ ịhụ ebe."
HE Sheikha Mai ga-ekwu okwu na mmemme WTN Launch na Disemba 10. Pịa ebe a iji sonye.
Ndị njem nwere nkwarụ achọghị ka a hụ ha dịka ndị ọrịa. Ha ga-aga njem nkwanye ugwu ma kwanyere ha ugwu. Nke a bụ ohere azụmaahịa onye ọ bụla nwere ike irite uru na ọ bụghị azụmaahịa nke mwute ma azụmaahịa nha anya. Ọ ga-ewe akụkụ dị mkpa mgbe ị na-ewughachi ụlọ ọrụ njem na njem.
Kedu ihe bụ njem njegharị nwere ike ịnweta? Ọ bụ nnukwu ohere azụmaahịa nwere ihe obi ụtọ gụnyere.
Enweta njem na-enyere mmadụ niile aka isonye ma nwee ọ .ụ njem ahụmahụ. Ọtụtụ mmadụ nwere mkpa ịnweta, ma ọ bụ metụtara ọnọdụ anụ ahụ ma ọ bụ na ọ metụtara. Dịka ọmụmaatụ, ndị okenye na ndị na-erughị ala na-enwe mkpa ịnweta, nke nwere ike ịghọ nnukwu ihe mgbochi mgbe ị na-eme njem ma ọ bụ na-agagharị.
Lelee nnọkọ ndị otu WTN abụọ ahụ site n'aka Mr. Pankaj Pradhananga na Tarita Davenrock, onye isi oche nke Travel for All, na British Columbia, Canada.
Pankaj Pradhananga sitere na njem njem anọ na Kathmandu, Nepal
Onye WTN Tarita Davenrock, onye isi oche nke Travel for All in BC, Canada
Lelee ma debanye aha maka mmemme WTN na-abịanụ pịa ebe a